Tommy's Love Stories:ွ့Ghost Girl & Me - Part 3
“အောင်သက်.. ငါ သူ.ကို နင့်အိမ်မှာ တွေ.ခဲ့တယ်…”
“မပန်းအိကို သတ်တဲ့သူကို ညီမက တွေ.ခဲ့တယ်ပေါ့” စခန်းမှူးက မေးသည်။
“အဲဒါတွေ ကျွန်မ မမှတ်မိဘူး၊ ကျွန်မသိသမျှက အဲဒီနေ့က ပန်းအိအိမ်ထဲမှာ ကျွန်မရယ်၊ အောင်သက်ရယ်၊ ပန်းအိရယ် ၃ယောက်တူတူရှိနေခဲ့တယ်”
“အဲဒါဘဲ သိတယ်.. မမှတ်မိတော့ဘူး…”
“ကွယ်လွန်သူက ဓားထိုးခံရတဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးခဲ့တာ.. ကိုအောင်သက်က မပန်းအိကို ဓားနဲ့ထိုးတာကို မြတ်ဖူးငုံက မျက်မြင်တွေ.ခဲ့တာလား..”
“ကျွန်မ တကယ်မသိဘူး.. မမှတ်မိတော့ဘူး.. အဲဒီနေ့က ပန်းအိမွေးနေ့၊ ကျွန်မတို. ၃ယောက် ပန်းအိ အိမ်မှာ တူတူရှိခဲ့ကြတယ်၊ အောင်သက်က မွေးနေ့ကိတ်ယူလာတယ်၊ မွေးနေ့ကိတ်ခွဲဖို. ဓားကပန်းအိရဲ့လက်ထဲမှာ.. ကျွန်မက ပန်းစည်းယူလာတယ်…” သူမဆံပင်ရှည်တွေ လွင့်နေအောင် ခေါင်းကို ခါယမ်းရင်း မျက်ရည်အချို.ပါးပေါ်ကျလာခဲ့သည်။ ရှိုက်သံတစ်ဝက်နှင့် ဆက်ပြောမိတာက “ကျွန်မ တကယ်ကို မသိတော့ဘူး”
နဘေးမှ ကွန်ပျူတာစာရေးရဲက ၀င်ပြောသည်။
“တစ်နေ့ကမှ အတိတ်မေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ ဆေးရုံကမှတ်ချက်နဲ့ စခန်းကို သူလာပြီး သူ.ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကို လာတောင်းသွားတယ်ဆရာ..”
စခန်းမှူးက နားလည်သွားသလို ခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ့်ရင်း၊
“ကောင်းပြီ.. ညီမပြောတာတွေကို ကျွန်တော်တို. မှတ်တမ်းတင်ထားပါ့မယ်။ ကိုအောင်သက်ကိုယ်တိုင်လဲ အမှုဖြစ်တဲ့ ရက်ဝန်းကျင်ကတည်းက ပျောက်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ ညီမပြောတာတွေက ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုပါ။ လက်ရှိတော့ သက်သေခိုင်မာမှု မရှိသေးတာာရယ်၊ အချက်အလက်တွေ မပြည့်စုံသေးတာရယ်ကြောင့် ကိုအောင်သက်ကို တရားခံလို. စွပ်စွဲလို.မရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို. အနေနဲ့ အမှုထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကို စောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင် ညီမလဲ ခ၇ီးဝေး မသွားပါနဲ့။ လိုအပ်ရင် ချက်ချင်းခေါ်မေးလို.ရအောင်ပါ။ အခုလို သိသမျှကို လာပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။”
စခန်းမှူးပြောသော စကားများကို နားထောင်ပြီး၊ သူမရဲ့ အစိမ်းရောင် တိုက်ခန်းလေးကို ပြန်လာခဲ့သည်။
အခန်းထဲရောက်တော့ သူမတစ်ကိုယ်လုံး အားအင်ချိနဲ့နေပြီ။ ပန်းအိက သူမနဘေးမှာ မှီထိုင်ရင်း တစုံတခုကို တွေးတော လွင့်မျောနေသလို။
တကယ်တော့ သူမတို.၂ယောက်ဟာ လမ်းပျောက်နေတဲ့ လမ်းမှာ စမ်းတ၀ါးဝါးလျောက်နေရသူတွေလို…..
Posted by Tommy Girl at 7:33 AM
linnsu March 31, 2014 at 9:14 PM
Patrick Holmes November 25, 2015 at 8:20 AM
do you have facebook account? I want to be friend with you.